မြင်သူငေး သုံးသူခိုက်မယ့် Forest GO LuancherEX Theme v1.6 Apk – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Sun, Mar 17th, 2013 Android OS application များ | By Myo Minn Thant မြင်သူငေး သုံးသူခိုက်မယ့် Forest GO LuancherEX Theme v1.6 Apk
Tags Share တစ်စုံတစ်ရာကို အမြဲတမ်းထပ်ခါထပ်ခါ သုံးရရင် ငြီးငွေ့လာတတ်တာ လူ့သဘာဝပါ…အဲဒီအခါ အသစ်အဆန်းလေးတွေကပဲ လူ့စိတ်ကို လန်းဆန်းစေတာမဟုတ်လား …အခုလည်း Go Launcher Crazy သမားများအတွက် Theme ခပ်လန်းလန်းလေးပါ ..Crazy မဟုတ်တဲ့သူတွေ တောင် သုံးရင် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Theme ပါ……နံနက် အာရုံကျင်းချိန်ကို တောထဲမှာ ဖမ်းယူရိုက်ကူးထားတဲ့ Themes လေးမို့ အရမ်းမိုက်ပါတယ် ..အရောင်ကလည်း အစိမ်းရင့်ရောင်(Deep Green) လေးဖြစ်တာမို့ မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်စေမှာအမှန်ပါ… Themes တွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ (6) မျိုးတောင်ပေးထားသလို Memory cleaner ၊ Hide app setting တွေတောင်ထည့်ပေးထားတာကြောင့် သုံးစွဲသူ အကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပါ …ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ဖုန်းမှာ Go Launcher ကို အရင် ထည့်ထားရပါမယ်…….
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို google play မှာ HK$15.45 Buy နဲ့ဈေးကြီးပေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် …
Myanmar Mobile App Store မှာတော့ Freedownload ရယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ……….
Myo Minn Thant - ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့က ပိုက်ဆံရှာဖို့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို တည်ထောင်တာ မဟုတ်ပါ..ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ တည်ဆောက်ဖို့ ပိုက်ဆံရှာတာပါ ..
မာ့ခ်ဇက်ကာဘတ်(facebook website တည်ထောင်သူ)
7 comments on “မြင်သူငေး သုံးသူခိုက်မယ့် Forest GO LuancherEX Theme v1.6 Apk”	nay lin aung on March 17, 2013 at 6:52 am said:
Reply ↓	aung aung on March 17, 2013 at 9:32 am said:
mediafire ကနေဒေါင်းလို့မရဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်လဲပြောပြပေးပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply ↓	အမျိုးကောင်းသား on March 17, 2013 at 3:40 pm said:
Reply ↓	ကိုဖြိုး on March 18, 2013 at 2:11 pm said:
လုပ်ကြပါအုံး ဘယ်လိုမှဒေါင်းလို့မရဘူး ဂျိုကာမပါလို့လားမသိဘူးနော်
Reply ↓	မြင်းခြံ သား San Lin Tun on March 19, 2013 at 3:01 pm said:
ကျေးဇူး အထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း . . .
Reply ↓	ဗန်းမော်သားလေး on March 19, 2013 at 5:11 pm said:
Reply ↓	san aung htet on March 19, 2013 at 6:43 pm said:
zin mg mg on Samsung galaxy S3 သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..3n3my on Huawei U8950D ကို S4 custom rom တင်မယ် ..3n3my on Huawei U8950D ကို S4 custom rom တင်မယ် ..starlay on Samsung galaxy S3 သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..min min on Samsung Galaxy Official Firmwares Android Development